Somaliya oo maanta si rasmi ah u joojisay sharcigii dal ku galka ee dalka Suudaan.. | shumis.net
Home » News » Somaliya oo maanta si rasmi ah u joojisay sharcigii dal ku galka ee dalka Suudaan..
Somaliya oo maanta si rasmi ah u joojisay sharcigii dal ku galka ee dalka Suudaan..
Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha Somaliya, ayaa waxay maanta ku dhawaaqday inay si buuxdo u joojisay sharcigii dal ku galka ee dalka Suudaan.
Tani waxay ka dambeysay markii ay toddobaadkan soo baxeen wararka la xiriira dooni ay la socdeen illaa shan boqol oo ruux, oo Soomaali ay u badneyd, kuma dhimatay badda u dhaxeysa Masar iyo Talyaaniga.
General C/laahi Gaafow Maxamuud, Taliyaha Laanta Socdaalka iyo Jinsiyadaha Somaliya, ayaa wuxuu daaha ka rogay inay joojiyeen Visaha dal ku galka ee dalkaasi Suudaan, si loo badbaadiyo dhalinta Somaliyeed ee badda ku la’aneysa.
Taliyaha oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu wax laga naxo uu ku tilmaamay in ku dhawaad 500 oo ruux oo Soomaali u badan inay mar qura ku dhimato badda.
“Waa wax laga naxo in 450 qof u badan Soomaaliya inay hal mar badda ku dhamaadaan, taasi waxay na soo xusuusineysaa 1991, markii dalka dhibaatada ka dhacday tahriibkii bilowday in dad badan ay badaha ku dhamaadeen.” Ayuu yiri General C/laahi Gaafow Maxamuud.
General Gaafow, ayaa sheegay sababta ay u joojiyeen sharciga dal ku galka ee Suudaan inay tahay, in inta badan dadkii ka amba baxay dalka Masar, inay Viso ku taggeen dalka Suudaan, ugana sii gudbeen Masar.
Jananka waxaa uu Maamul Goboleedyada Wadanka ka dhisan uu ugu baaqay inay joojiyaan dhalinta Somaliyeed, ee sida indha la’aanta ah uga safreysa deegaanadooda, si loo yareeyo dadka ku dhimanaaya badaha.
Title: Somaliya oo maanta si rasmi ah u joojisay sharcigii dal ku galka ee dalka Suudaan..
Posted by galmada Net, Published at April 20, 2016 and have 0 comments